नुवाकोटका चमेली र रुकमायाको दिल्लीमा वे,’श्या,’ल,,य, नेपाली यु,व,ती यस,री लैजान्थे – Taja Khawar
नुवाकोटका चमेली र रुकमायाको दिल्लीमा वे,’श्या,’ल,,य, नेपाली यु,व,ती यस,री लैजान्थे
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १६, २०७८ समय: ०:०१:०६
By Nepalnews -March 12, 2021023271
काठमाडौ । नुवाकोटका दुई महिला भारतको नयाँ दिल्लीमा वे’श्यालय सञ्चालन गर्ने र महिलालाई बे’चबि’खन गरेको अ’भियोगमा पक्राउ परेका छन् । उनीहरुले दिल्लीमा बे’श्यालय संचालन गरेर नेपाली युवतीहरुलाई लै’जाने गरेको बताइएको छ ।
मा’नव बे’चबिखन अ’परा’धमा सं’लग्न रही फ’रार रहेकी उनलाई नुवाकोट प्रहरीको सहयोगमा मानव बे’चवि’खन अनुसन्धान ब्यु’रोले पक्राउ गरेको हो। नुवाकोटको दु’प्चेश्वर नगरपालिका २ की ६२ वर्षीया च’मेली र सीता तामाङ भन्ने रु’कमाया तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनले नयाँ दिल्लीस्थित जी’बी रो’ड ५६ नं ग’ल्लीमा को’ठी सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको सहयोगमा वि’दुर नगरपालिकाबाट पक्राउ परेकी तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ दिन म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको ब्यु’रोका डीएसपी ढु’ण्डिराज नेउपानेले बताए।
रु’कमायाकी सहयोगीले चितवनमा चि’नजानको मानिसको घरमा काम ल’गाइदिन्छु भन्दै युवती फ’काउने गरेकी थिइन् । उनले त्यसरी आफ्नो कुरा विश्वास गर्ने यु’वतीहरुलाई काठमाडौं ल्या’एर भारत लै’जान्थिन्। काठमाडौंको कलंकीबाट बसमा च’ढाई लैजाने क्रममा पानीमा बे’हो’स हुने औ’ष’धि मि’साएर खु’वाएको भन्दै उनीवि’रुद्ध जा’हे’री परेको थियो।
भारतको नयाँदिल्ली ल’गेपछि रुकमायाले सञ्चालन गरेको को’ठीमा लगी बिक्री गरेको पाइएको थियो। रुकमाया वि’रुद्ध उ’जुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान था’लेको थियो । यी घ’टनामा सं’लग्न रहेका अन्य प्र’तिवादीहरुको खो’जतलास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
चर्चित अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले अन्तत गर्ने भइन् आँफुभन्दा कान्छा यि ह्यण्डसमसँ विबाह गरे…..
August 31, 2021 adminसमाचारNo Commenton चर्चित अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले अन्तत गर्ने भइन् आँफुभन्दा कान्छा यि ह्यण्डसमसँ विबाह गरे…..
काठमाडौँ – ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले कमेडी च्याम्पियनको गएको एपिसोडमा पूर्वयुवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरे । उनको प्रस्तुतीले निकै चर्चा बलुटेको छ । जो कमेडी च्याम्पियनमा आउनुअघि यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउन संघर्षरत थिए । युट्युवमा उनका केही भिडियो पहिल्यै हिट भइसकेका थिए । यद्यपि, कमेडी च्याम्पियनको मञ्च पाएपछि उनको पहिचान रातारात उचाइमा पुगेको छ ।
भरतमणिको फिजिकल अडिसन सामान्य थियो । तर, त्यसपछिका प्रस्तुतिहरुमा उनले आगो बाले । एपिसोड ६ मा उनले गरेको पुण्य गौतम र हिमेश पन्तको क्यारिकेचरले धुम मच्चाएको थियो । त्यहीँबाट उनी दर्शकको नोटिसमा पर्न थालेका हुन् ।उक्त प्रस्तुतिमा कमेडी च्याम्पियनका पूर्वविजेता हिमेशलाई व्यंग्य गर्दै भरतमणिले भनेका थिए, ‘कमेडी च्याम्पियनले खासमा पुरस्कार नै गलत राखेको हो । कार होइन, ट्याक्टर राख्नुपर्थ्यो, हिमेशले कम्तिमा खेत जोतेर जीविका चलाउँथे ।’
१५ औं एपिसोडमा भरतमणिले आफ्नो बेस्ट दिए । त्यसमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित विभिन्न नेताहरुको दुरुस्त क्यारिकेचर गरेका थिए । र, त्यसमा कन्टेन्ट पनि उत्तिकै बलियो थियो ।भरतमणिले गरेको गोकुल बास्कोटाको क्यारिकेचर त स्वयम् गोकुल बास्कोटा नै झुक्किने खालको थियो । ‘हेप्नी ? मान्छेलाई डिस हान्नी ? औडा अर्नि ? यस्तै–यस्तै कुरा गर्यौ भने भाइ, हामी मान्छेहरु नि कोल्याप्स गरिदिन्छौं ।’
गोकुलको आवाजमा भरतमणिले बोलेको यो डाइलग टिकटकमा यति चल्यो कि धेरैको जिभ्रोमै झुण्डियो । सोही प्रहसनमा भरतले गरेको राजा ज्ञानेन्द्र, रामनारायण बिडारी, राजेन्द्र महतोलगायतको क्यारिकेचर पनि कम्ति टेसिलो थिएन ।
त्यसपछिका एपिसोडमा पनि उनले आफ्नो स्तर कहिल्यै तल झर्न दिएनन् ।भरतमणिले गरेको पारसको क्यारिकेचरका बारेमा त धेरै चर्चा भइसकेको छ । यसमा उनले पारसको आवाज मात्र नभएर हाउभाउ पनि दुरुस्त उतारेका छन् । उनले पारसका हुलियामा गरेको डान्स स्टेप टिकटकमा भाइरल भएको छ।
तर, कमेडीमा यो एउटा कठिन विधा हो । एकछिन सोचेर अरुको बोली र हाउभाउको दुरुस्त नक्कल उतार्न सकिँदैन । यसका निम्ति कलाकारले खर्चेको समय र मिहिनेत दर्शकले देख्दैनन् ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालजस्ता नेताहरुको क्यारिकेचर गर्ने धेरै कलाकार छन् ।
उनीहरुको क्यारिकेचर हेर्दाहेर्दा दर्शक नै बोर भइसके । भरतमणिले भने पूवयुवराज पारसदेखि रामनारायण विडारी, पुण्य गौतम मात्र नभएर हिमेस पन्तसम्मको क्यारिकेचर गरेर दर्शकलाई नयाँ स्वाद दिएका छन् ।
Last Updated on: September 1st, 2021 at 12:01 am